Iindaba-Ukuphuhliswa kwetekhnoloji yegumbi ecocekileyo
Igumbi elicocekileyo libhekisa ekususweni kwamasuntswana, umoya onobungozi, iintsholongwane kunye nezinye izinto ezingcolisa umoya ngaphakathi kwisithuba esithile, kunye nolawulo lobushushu ngaphakathi, ucoceko, uxinzelelo lwangaphakathi, isantya somoya kunye nokusasazwa komoya, ingxolo, ukungcangcazela, ukukhanya kunye no-static Umbane ngaphakathi kuluhlu oluthile lweemfuno, kwaye kunikezelwe igumbi elikhethekileyo.
Umgaqo wokusebenza ococekileyo: Ukuhamba komoya → ukucoca okuphambili → icandelo lokufuma buyisela izivali zomoya → ukucoca okuphindiweyo kuphinda oku kungasentla Inkqubo inokufezekisa injongo yokuhlanjululwa.
Phakathi kwiminyaka yoo-1960, amagumbi acocekileyoyavela kumacandelo ohlukeneyo emizi-mveliso eUnited States. Ayisetyenziswanga kuphela kwimizi-mveliso yezomkhosi, kodwa ikwakhuthaza kwi-elektroniki, ii-optics, iibheringi ezincinane, ii-motors ezincinane, iifilimu ezinemifanekiso, ii-reagents zamachiza ezisulungekileyo kunye namanye amacandelo emizi-mveliso.
Itekhnoloji kunye nophuhliso lwamashishini ludlale indima ebaluleke kakhulu ekukhuthazeni.
Ekuqaleni kwee-1970s, kugxilwe ekwakheni igumbi elicocekileyo kwaqala ukutshintshela kumashishini ezonyango, amayeza, ukutya kunye nemichiza. Ukongeza eUnited States, amanye amazwe ahambele phambili kwezamashishini, anjengeJapan, iJamani, iBritane, iFransi, iSwitzerland, ilizwe elalisakuba yiSoviet Union, kunye neNetherlands, nazo zibalule ukubaluleka kakhulu kwaye zaphuhlisa ngamandla itekhnoloji ecocekileyo.
Ii-1960s zokuqala yayilinqanaba lokuqala lokuphuhliswa kwetekhnoloji ecocekileyo yase China, kwiminyaka elishumi kamva kunakwilizwe langaphandle. E-China, yayilixesha elinzima kakhulu. Kwelinye icala, yayisandula ukudlula iminyaka emithathu yeentlekele zendalo kwaye isiseko soqoqosho lwayo sasibuthathaka. Kwelinye icala, ibingadibani ngqo namazwe ahambele phambili kwezenzululwazi kunye netekhnoloji emhlabeni kwaye ayinakufumana datha yesayensi kunye netekhnoloji eyimfuneko, ulwazi kunye neesampulu. Ngaphantsi kwezi meko zinzima, kugxilwe kwiimfuno zokuchaneka koomatshini, izixhobo zokuhamba ngenqwelomoya kunye nemizi-mveliso ye-elektroniki, abasebenzi betekhnoloji ecocekileyo base China sele beqalisile uhambo lwabo lokurhweba.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iimfuno malunga negumbi elicocekileyo, nceda unxibelelane nathi, nge-imeyile yethu: xuebl@tekmax.com.cn Ndijonge phambili ukuva kuwe.
Igumbi lokucoca umoya ococekileyo, Igumbi elicocekileyo, Ukucoca iCandelo loMoya oMtsha, Ifestile yokuGqibela yokuCoca igumbi, Inkqubo yaManzi aBandayo, Ifestile yegumbi elicocekileyo,